प्रतिनिधी मलाई जिताउन आतुर छन् : वराल – YesKathmandu.com
अनेरास्ववियुको २२ औ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौमा जारी छ । महाधिवेशनले आगामी दुई बर्षका लागि नया नेतृत्व गदै छ । अनेरास्ववियुको दुई पटक सचिवालय सदस्य भएकी सुनिता वराल पनि महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएकी छन् ।
विराटनगरमा स्कुल पढदादेखि नै अखिलको राजनीतिकमा सक्रिय वराल अखिल भित्रकी लगनशील र अनुशासिन नेतृ हुन् । अधिवक्ता समेत रहेकी वरालले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको इन्चार्ज समेतको जिम्मेवारी निभाई सकेकी छिन् । अखिल अव बौद्धिकवर्गको संगठन बनाउने अभियानमा लागेकी उनी उपाध्यक्ष पद जित्नेमा ढुक्क रहेकी छन् । उनी आफूलाई महाधिवशेनमा सहभागि भएका ७५ प्रतिशत प्रतिनिधीहरुको समर्थन रहेको बताउछिन । प्रस्तुत छ उनै उपाध्यक्षका उम्मेदवार वरालसंग गरिएको कुराकानी ।
महाधिवेशन कतिको लागेको छ ?
महाधिवेशन निकै लागेको छ । दौडधुप,भेला भइरहेका छन् । बन्दसत्र भएपनि प्राविधिक कारणले निर्वाचन रोकिएको छ । त्यो प्रतिनिधी विवादको कारणले हो । सायद त्यो पनि टुग्यिसक्यो । अव आज मनोनयन भएर भोली निर्वाचन हुन्छ । अव निर्वाचनमा होमिएको हुनाले हामी अन्तिम तयारीमा छौ ।
तपाई उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिदै हुनुहुन्छ । जितेपछि अखिल कस्तो बनाउने त ?
अखिललाई बैचारिक विद्यार्थीको संगठन बनाउने योजना छ । संगठन भित्र मौलाएको विकृत अन्त्य गर्ने,संगठन शुद्धिकरण गर्ने र सांगठनि र व्यक्तिगत जीवनमा देखिएका विकृत अन्त्य गर्ने योजना छ ।
अर्को कुरा शैक्षिक आन्दोलनलाई मुख्य कार्यभार बनाई अगाडि बढाउने,समानता सहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई डो¥याउनेका निम्ति संगठन हाक्ने पहल कदमी हुने छ । अव अखिल क्याम्पस नपढ्ने होइन कक्षाकोठा छिर्ने आम विद्यार्थीको संगठन बनाउने छु ।
अखिललाई चन्दा गुण्डागर्दी विहिन र नैतिक आचारणमा स्वच्छ बनाउने मेरो सोचाई छ । एउटा बौद्धिक वर्गहरुको संगठन निर्माण गरि साच्चिकै विद्यार्थी आन्दोलनको अगुना संगठन निर्माण गर्ने योजना छ ।
चुनाव कसरी जित्नुहुन्छ त तपाई ?
सुनिता वराल भनेको अखिलभित्र क्रियाशिलता विद्यार्थी नेतृ हो । मेरो क्रियाशिलताले मलाई धेरेले चिन्ने गरेका छन् । प्रतिनिधीको हिसाव गर्ने हो भने १४ अंचल र ७५ जिल्लाका बहुमत प्रतिनिधी मेरो पक्षमा रहेका छन् । मलाई उनीहरु भोट हाल्न आतुर छन् । उनीहरुको मायाले नै म उपाध्यक्ष पदमा जित्दैछु
उसो भए तपाईको चुनाव जित्नमा ढुक्क हुनुहुन्छ त ?
हो म ढुक्क छु । किनकी अहिले छनौट भएर आएका प्रतिनिधी मेरो पक्षमा छन् । अहिले छानिएका प्रतिनिधीमध्ये मेरो पक्षमा ७५ प्रतिशत प्रतिनिधी छन् । मेरो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राम्रो छ । उनीहरुले मलाई जिताउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिसकेका छन् । म सवैको बीचमा लोकप्रिय पनि छु । र मलाई माया गर्ने मेरा साथीभाईले नै मलाई जिताउने छन् ।
प्रतिनिधीलाई प्रलोभनमा पार्न संम्भावना कतिको देख्नु भएको छ ?
त्यस्तो केही सुन्नमा आएकमो छ । तर म विश्वास गर्दिन । अहिलेका महाधिवशेनमा सहभागि भएका प्रतिनिधी विवेकशील छन् । आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न जानेका छन् । त्यसैले प्रलोभनमा पदैनन ।
राजनीतिकमा आउनुको उद्देश्य ?
एक असल नेता भई देश समाजको सेवा गर्नका लागि ।
महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउनुपर्दछ त ?
मेरो विचारमा अखिलको नेतृत्व अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन सिर्जित योग्य सक्षम,सामदाम दण्डभेदको प्रयोग गर्ने,पढाईलाई मुख्य बिषयबस्तु नठान्ने नेतृत्व स्थापित हुनुपर्दछ ।
तपाई पनि नेतृत्वमा आउन थाल्नु भएको छ । अनि अखिललाई कस्तो बनाउने योजना देख्नु भएको छ ।
अखिल भित्रको तपाई नेताको रुपमा चिनाउनुहुन्छ ?
म अखिलभित्रको एक अनुशासित,इमान्दार,लगनशिल र काममा विश्वास गर्ने वैचारिक नेतृ हँु् । सवैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्ने गर्छु ।
तपाईको एजेण्डा के छन त ?
अहिले म उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार भएकोले एजेन्डा मूलत शैक्षिक आन्दोलनमा केन्द्रीत छन् ।
हामीले विगत देखि जसरी आन्दोलन गर्दै आयौं र राजनीतिक परिस्थिती तथा चेतनाको स्तरका बाबजुत हामी शैक्षिक एजेण्डाहरु पनि रुपान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा आएका छौँ । शैक्षिक आन्दोलनका स्वरुपहरु परिवर्तन गर्दै हामीले उठाउने मुद्दा पनि रचनात्मक, सिर्जनात्मक र परिमार्जित शिक्षाको सँरचनालाई पनि जीवनमूखि हुनुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ ।
केही समयदेखि रोकिएको स्ववीयु निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मा हामीमा छ । प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालयमा अझ बढी सहभागी गराउँदै जनतासामु लानुपर्ने र अब शिक्षा मात्रै हैन जीवन उपयोगी शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएका छौँ । समय सापेक्ष शिक्षा नितिको अभावमा जनचेतना,सामाजिक परिवर्तन र विकासको गतिको लिग भित्र मुलुकलाई राख्न नसक्दा विश्व परिवेशमा फेरि पनि हामी अविकसित,गरिव र भ्रष्ट मुलुकको सूचिमा छौ । शिक्षाको विकासको मूल आधार हो प्रगतिको वाहक हो त्यसैले एजेण्डा नै सर्वसुलभ जनमुखी शिक्षा र आर्थिक समृद्धिमा विद्यार्थीहरुलाई सहभागि गराउन अवको विद्यार्थी आन्दोलन बनाउनु पर्दछ भन्ने हो ।
अवको विद्यार्थी आन्दोलन के का लागि हुनुपर्दछ ?
अव राजनीतिक होइन अव शैक्षिक आन्दोलन गर्न जरुरी छ । नेपालको समान्तवादी शिक्षा निति परिवर्तन र समाज व्यवहारमुखि र सर्वसुलभ शिक्षा निति कार्यन्वयन गदै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देखाउने प्राविधिक शिक्षामा सरकारका उच्च लगानीमा जोड दिनका लागि अवको विद्यार्थी आन्दोलन हुुनुपर्दछ ।
﻿गौरिका ३१औँ स्थानमा रहँदै बाहिरिइन्
बिस्केट जात्रामा खटिएका प्रहरीमाथि ढुंगामुढा , १३ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा